Potential is Learning Agility ( Part-1) ﻿
Potential is Learning Agility ( Part-1)
JobsInYangon နှင့် City FM တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Career Knowledge အစီအစဉ်မှာ www.jobsinyangon.com မှာ Senior Key Account Manager မညိုလဲ့လဲ့သင်းနှင့် လက်ရှိ Myanmar Awba Company မှာ Group Performance Development Director အနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မရီမွန်ကျော် တို့မှ Potential ဆိုတာ Learning Agility ဖြစ်ပြီး Learning Agility ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ နောက်ပြီး Learning Agilty5မျိုးနှင့် Learning Agility ကို ဘယ်လို develop ဖြစ်အောင် လုပ်သွားမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားပြီး အပိုင် ၁ မှာတော့ What is Potential? What is Learning Agility တို့ကို ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Learning Agility5မျိုးကတော့
3. People Aiglity
5. Result Agility တို့ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်ကို Audio မှာ နားဆင်အားပေးလိုက်ပါအုံးနော်။
ဒီအပိုင်း ၁ မှာ ဆွေးနွေးပေးထားမှုက Potential Talent တွေကို ရှာဖွေနေတဲ့ HR တွေအတွက်ရော မိမိရဲ့ Career Development အတွက် သင်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါသည်/
အားပေးနားဆင်မှုကို www.jobsinyangon.com by Roger Quest International မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၂) ကို လည်း ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါအုံးမည်။